अनमोल र प्रदीपको भिडन्त ? – Khabar Silo
अनमोल केसी र प्रदीप खड्का नेपालमा स्टारडम भएका कलाकार हुन्। उनीहरूका हरेक गतिविधि समाचार बन्ने गरेका छन्। त्यसमा फिल्म त छुट्ने कुरै भएन। तर, यति चर्चामा आएको खबर सत्य हो भने यो खबरले दुवैका फ्यानलाई भने झट्का लाग्न सक्छ। किनकि, ताजा अफवाहअनुसार अनमोल र प्रदीपका फिल्म एकै मितिमा आउँदै छन्। प्रदीपको ‘प्रेमगीत ३’ र अनमोलको ‘धुपौरे’ एकै मितिमा आउन लागेका हुन्।
प्रदीपको ‘प्रेमगीत ३’ले धेरै पहिला चैतको २८ गतेलाई प्रदर्शन मितिको रूपमा प्रचार गर्दै आएको थियो तर अनमोलले अचानक ‘धुपौरे’ साइन गरेपछि यो फिल्मका निर्माता तथा वितरक पनि सोही मितिमा आँखा गाड्न आइपुगेका छन्। ‘धुपौरे’का एक वितरकको भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने यो फिल्म ‘प्रेमगीत’सँगै नयाँ वर्षको अवसरमा प्रदर्शन हुनेछ। अनमोल गत वर्ष पनि उदाउँदा स्टार सलिनमान बानियाँसँग भिड्न पुगेका थिए।
अनमोलको ‘ए मेरो हजुर ३’ र सलिनको ‘यात्रा’ एकै मितिमा प्रदर्शन भएका थिए। फिल्म बनाउनभन्दा निर्माताको मेहनत बिदा कब्जा जमाउनमा देखिन्छ। यति गरीकन फिल्म पनि राम्रो बनाए पो !
परदेशमै रहेरपनि निरन्तर गीत संगीतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान संगै योगदान दिदै आएका परदेशी गायक सुर्य खड्का र चर्चित गायीका दुर्गा सापकोटा को आवाजमा नैना रेशम गीत बजारमा आएको छ। गीतको शब्द सिर्जना चर्चित गीतकार शिब अखेलीले गर्नु भएको छ भने संगीत स्वयम गायक सुर्य खड्काले नै दिनु भएको हो। गीतको भिडीयोको निर्देशन मा चर्चित मोडल […]
काठमाडौं – नायिका तथा मोडल एलिसा राईले लघु चलचित्र हुँदै सिनेमा र म्युजिक भिडियोमा पाइला चालिन् । फिल्म ‘लूट २’ को ठमेल बजार गीतले उनलाई एकाएक चर्चामा ल्याइदियो । रातारात एलिसाको डिमान्ड बढ्न थाल्यो । त्यसपछि एलिसाले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । फिल्ममा खासै नदेखिए पनि एलिसा म्युजिक भिडियोमा भने खुबै छाएकी छिन् । पछिल्लो […]
काठमाडौं महाभारतका चर्चित पात्र द्रौपदीका बारेमा अनेक चर्चा चल्ने गर्छ । पाँच पतिका साझा श्रीमतीका रुपमा रहेका कारण पनि द्रौपदी विवादित पात्रका रुपमा चिनिन्छिन् । राजा दु्रपदले यज्ञको आयोजना गरी पुत्र धृष्टद्युम्न र पुत्री द्रौपदीलाई प्राप्त गरेका थिए । जन्मेको कयौंबर्षसम्म पनि राजा द्रुपदले आफ्नी पुत्रीको रुपमा द्रौपदीलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । पाँच पतिसँग विवाहपश्चात द्रौपदी […]